Ndị spammers na-arụsi ọrụ ike ọzọ, anyị ga-ewepụkwa ihe iji kpochapụ ha. Mgbe mpempe akwụkwọ Spam na-akụ na ebe nrụọrụ weebụ m, ekpebiri m igwu ihe ọzọ, o juru m anya ịhụ na onye ọhụụ ọhụrụ na-agbalị imebi data Google Analytics m. Nke mbụ, ana m enyocha okporo ụzọ ozi iji mara ihe mere weebụsaịtị m ji enweta ọtụtụ okporo ụzọ site na Russia. Achọtara m onye ahụ mebiri ihe n'oge ọ bụla ma kpebie ime ihe. Onye Spammer nke Russia si na saịtị ndị a: forum.topic darodar.com.